Tokony ho vita fitiliana ara-dalàna ataon’ny dokoteram-biby ny hena amidy eny an-tsena, manoloana ny aretina mamely ny omby any atsimo. Manamafy ny sampandraharahan’ny biby ao amin’ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana, sy ny jono, fa na efa nandalo fitiliana aza izany, tsy azo atao ny mihinana hena manta na tsy masaka tsara. Tokony ho mailo ny mpanjifa rehetra koa entanina ny rehetra hanala ny lobolobo manodidina azy, tsy hisian’ny kaikitry ny moka mamindra aretina avy amin’ny biby.
Namokatra zanak’ovy 12 t ny kaoperativa iray ao amin’ny Ovin’i Vakinankaratra ho fiatrehana ny voly avotra. Afaka miara-miasa amin’ny tantsaha manerana ny Nosy izy ireo ho fampiroboroboana ny voly ovy. Zanak’ovy novakarina manara-penitra ireo. Misy 246 ny mpikambana ao amin’io kaoperativa io, niezaka namelona ny zanak’ovy sy nanara-maso izany, na tapaka aza ny famatsiam-bola. Ao koa ireo federasiona manana zanak’ovy. Andrasan’ireo kaoperativa sy ny federasiona ny paikady avy amin’ny fanjakana.
Hisokatra ny 16 avrily ho avy izao ny fotoam-piotazana sy ny fivarotana voasary any amin’ny faritra Vatovy Fitovinany, araka ny didy navoakan’ny faritra. Efa voadinika ara-teknika io daty io ka manolona izay, manamafy ny sampandraharahan’ny varotra any amin’ny faritra fa na misokatra aza ny fotoam-piotazana, entanina ny mpamboly tsy hivarotra afa-tsy ny vokatra masaka tsara, entanina ihany koa ny mpanangom-bokatra hanaja ny lalàna eo amin’ny fifaninanana, ary manana karatra maha mpanangom-bokatra ho fiarovana ny mpanjifa.
Tondrahina ranom-panafody ny tsena rehetra ao Marovoay. Raisina izao fanapahan-kevitra izao ho fitsinjovana ny mpivarotra sy ny mpanjifa. Raha tsy misy mpivarotra, tsy misy ny haban-tsena miditra ao amin’ny kaominina avy amin’ireo karazan-tsena ao an-toerana ivezivezen’ny olona betsaka. Tsy afaka mivarotra ireo mpivarotra izay samy manana ny azy avokoa. Miara-miasa ny kaominina sy ny mpitandro filaminana, manentana ny mponina amin’ny sakana amin’ny valanaretina.